ပတ်သတ်မှု ရှိခဲ့ရင်လည်း လွတ်လပ်သူတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် လူမှုကျင့်ဝတ် ဖောက်ဖျက်ခဲ့တာ မရှိပါဘူး ဆိုတဲ့ မယ်လိုဒီ – Let Pan Daily
စိတ်ပူပင်နေကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး ကို အသိပေးပါရစေရှင် ကျွန်မအနေ နဲ့ မတူညီမှုများစွာနဲ့ ညှိမရတဲ့အနေအထား အခြေအနေတွေကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက အမျိုးသားနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ကြတာပါ။သားလေးနဲ့ မိဘများရဲ့မျက်နှာ၊ ထောက်ထားစရာတွေရှိတာကြောင့်သာ တရားဝင် မထုတ်မပြောခဲ့တာပါ တစ်မိုးထဲ အောက်၊ မိဘများနဲ့အတူ လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြတာ ကာလအတော်ကြာပြီဆိုတာ ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ သိကြပါတယ်။
သားလေးကိစ္စရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပွဲလမ်းတွေ ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ် သူနဲ့ကျွန်မက သားလေးရဲ့မိဘအနေနဲ့ရော၊ မိတ်ဆွေကောင်းအနေနဲ့ရော မိသားစုလို ပုံမှန်သွားလာတာလည်း ရှိခဲ့ကြပေမယ့်လည်း နှစ်ဦးစလုံးဟာ လွတ်လပ်သူ၊ အမှီအခိုကင်းသူအနေနဲ့ သီးခြားရပ်တည်ခဲ့ကြတာပါ. တရားဝင် လွတ်လပ်ကြသူတွေမို့လည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စကအစ စွက်ဖက်မှုလည်း မလုပ်ကြပါဘူး။
အနှောင်အဖွဲ့ကင်းတဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကျွန်မရဲ့ ရပ်တည်မှုမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘယ်မိသားစုကိုမှ ထိခိုက်စေခြင်းလည်း မရှိခဲ့တာတော့ သေချာပါတယ်။တရားဝင်လွတ်လပ်တဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ ပက်သက်မှုရှိခဲ့ရင်လည်း လွတ်လပ်သူတွေဖြစ်တဲ့ အတွက် လူမှုကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမရှိပါဘူး.. လွတ်လပ်သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်သီးခြားရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ပူပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ပြောပြချင်တာလေးပါ။ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ သီးခြားလွတ်လပ်စွာရပ်တည်နေတဲ့ ကျွန်မအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ပေးသူများရော၊ အထင်လွဲမှားနေသူများရော၊ အားလုံးပဲ အေးချမ်းကြပါစေ.. သက်ရှည်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာ လိုရာ ဆန္ဒပြည့်ကြပါစေရှင်။
ပတျသတျမှု ရှိခဲ့ရငျလညျး လှတျလပျသူတှေ ဖွဈတဲ့ အတှကျ လူမှုကငျြ့ဝတျ ဖောကျဖကျြခဲ့တာ မရှိပါဘူး ဆိုတဲ့ မယျလိုဒီ
စိတျပူပငျနကွေတဲ့ ပရိသတျကွီး ကို အသိပေးပါရစရှေငျ ကြှနျမအနေ နဲ့ မတူညီမှုမြားစှာနဲ့ ညှိမရတဲ့အနအေထား အခွအေနတှေကွေောငျ့ လှနျခဲ့တဲ့နှဈကတညျးက အမြိုးသားနဲ့ လမျးခှဲခဲ့ကွတာပါ။သားလေးနဲ့ မိဘမြားရဲ့မကျြနှာ၊ ထောကျထားစရာတှရှေိတာကွောငျ့သာ တရားဝငျ မထုတျမပွောခဲ့တာပါ တဈမိုးထဲ အောကျ၊ မိဘမြားနဲ့အတူ လှတျလပျစှာနထေိုငျခဲ့ကွတာ ကာလအတျောကွာပွီဆိုတာ ရငျးနှီးတဲ့ မိတျဆှတှေေ သိကွပါတယျ။
သားလေးကိစ်စရှိတာပဲဖွဈဖွဈ၊ ပှဲလမျးတှေ ရှိခဲ့တာပဲဖွဈဖွဈ သူနဲ့ကြှနျမက သားလေးရဲ့မိဘအနနေဲ့ရော၊ မိတျဆှကေောငျးအနနေဲ့ရော မိသားစုလို ပုံမှနျသှားလာတာလညျး ရှိခဲ့ကွပမေယျ့လညျး နှဈဦးစလုံးဟာ လှတျလပျသူ၊ အမှီအခိုကငျးသူအနနေဲ့ သီးခွားရပျတညျခဲ့ကွတာပါ. တရားဝငျ လှတျလပျကွသူတှမေို့လညျး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ကိုယျပိုငျဆုံးဖွတျခကျြ၊ ကိုယျရေးကိုယျတာကိစ်စကအစ စှကျဖကျမှုလညျး မလုပျကွပါဘူး။
အနှောငျအဖှဲ့ကငျးတဲ့ ကိုယျပိုငျ ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ ကြှနျမရဲ့ ရပျတညျမှုမှာ ဘယျသူ့ကိုမှ ဘယျမိသားစုကိုမှ ထိခိုကျစခွေငျးလညျး မရှိခဲ့တာတော့ သခြောပါတယျ။တရားဝငျလှတျလပျတဲ့သူတဈယောကျအနနေဲ့ တဈစုံတဈယောကျနဲ့ ပကျသကျမှုရှိခဲ့ရငျလညျး လှတျလပျသူတှဖွေဈတဲ့ အတှကျ လူမှုကငျြ့ဝတျဖောကျဖကျြခဲ့တာမရှိပါဘူး.. လှတျလပျသူတှအေနနေဲ့ ကိုယျပိုငျသီးခွားရပျတညျနတောဖွဈပါတယျ။
စိတျပူပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးကို နောကျဆုံး အနနေဲ့ ပွောပွခငျြတာလေးပါ။ကိုယျပိုငျဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ သီးခွားလှတျလပျစှာရပျတညျနတေဲ့ ကြှနျမအတှကျ စိုးရိမျပူပနျပေးသူမြားရော၊ အထငျလှဲမှားနသေူမြားရော၊ အားလုံးပဲ အေးခမျြးကွပါစေ.. သကျရှညျကနျြးမာ စိတျခမျြးသာ လိုရာ ဆန်ဒပွညျ့ကွပါစရှေငျ။
ကိုပေါက်ကို အကြီးအကျယ်ဆေးထိုး လိုက်တဲ့ ကျော်ကျော်ဗိုလ် ရဲ့ ဟာသ Tik Tok ဗီဒီယို
သရုပျဆောငျ ရဲတိုကျ မနေ့ ဧပွီ (၃) ရကျ ည က မရမျး ကုနျး မွို့ နယျ သမိုငျး လမျးဆုံ မှာ ဖမျးဆီး ခံခဲ့ရ